gaabinta : Ude
aasaasay : 1654
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Duisburg-Essen
Qor at University of Duisburg-Essen
The University of Duisburg-Essen (Ude), mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn Jarmalka, waxaa ka go'an inay kulan masuuliyadaha bulshada ay. Si aad u fuliyaan waajibaadka waxbarasho oo waxaa lagu soo eedeeyay iyo in la wado isbadal dhaqaale ee Gobolka, aan subscribe to heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee beeraha ee cilmi, waxbarashada iyo maamulka.
Waxaan u aragnaa noo jaamacad sida loo dhan yahay arkaayey oo dhan maaddooyinka oo dhan iyo dhammaan xubnaha oo sidaas daraaddeed Dadaashid shabakad maadooyinka iyo ka qaybgalka ballaaran ee dhan aqoonyahano, shaqaalaha iyo ardayda ee caqabad ku ah qaabeynta mustaqbalka Ude ah.
In berrinkii cilmi, waxaan mudnaanta afar meelaha maadooyinka:
• cilmiga Biomedical
• Nidaamyada magaalooyinka iyo goobaha magaalooyinka
• isbedelka bulshada casriga ah
Waxaan u hoggaansamaan midnimada jaamacadda dhaqanka ee cilmi-baarista iyo waxbarashada.
Waxaan la abuuro xaaladaha waxbarasho iyo shaqo-ugu wanaagsan ee suurto gal ah in maadooyinka oo dhan iyo dhamaan heerarka waxbarasho si ay u bixiyaan waxbarasho waxbarasho oo ku salaysan sayniska iyo cilmi-baarista, Garaaci baxay jiho cusub oo ah inay sidaa sameeyaan. In la dhigaayo our undergraduate iyo barnaamijyada degree postgraduate, waxaan ku hanuunsanahay by shuruudaha qofka iyo bulshada kala duwan macnaha guud ee barashada nolosha-dheer.
Horumarinta dheeraad ah tababarka macalimiinta ee waaxaha cilmi-baarista iyo waxbarashada waa arrin muhiim ah ee profile jaamacadda our. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka ah ee la beddelo in ka badan in ay bachelor koorsooyinka / sayidkiisa waxbarasho, waxa aan si adag daba siyaasad heerka waafaqsan tayada iyo dooneysa in la abuuro shuruudaha-fiican ee ugu macquulsan waxbarasho.
Waxaan ka fiirsan heterogeneity ardayda iyo shaqaalaha sida fursad gaar ah oo kor kala duwan via tallaabooyinka maamulka la doortay. Halkan waxaan fahamsanahay 'kala duwan’ sidii kaalin sinnaanta waxbarasho iyo tacliin heer sare. sinaanta jinsiga waa qayb muhiim ah oo dadaadlkaa.
Muddo qaabka guud ee nidaamka maamulka jaamacadda, waxaan ujeedadoodu tahay si ay u ilaaliyaan dheelitirka ku haboon u dhexeeya profile dhexe iyo nidaam maamul baahsan ee selfgovernance iyo is-mas'uuliyadda. The alaabta heshiisyada bartilmaameed iyo waxqabadka, maamulka miisaaniyadda, kontaroolka qiimaha iyo horumarinta shaqaalaha oo dhan ka helay in ay u adeegaan siyaasadaha our tayo adag hubaasha.
Sida xubin ka mid ah Alliance Jaamacadda Ruhr (UA Ruhr), aan wada jir ah ula University Ruhr ee Bochum iyo Technical University of Dortmund shaqeeyaan isku xirka dadaalka aan ugu jirno in ay dhiiri Ruhr sida gobolka sayniska, abuuro profile gaar ah, dejinta mudnaanta iyo sameynta shabakadaha sayniska iyo ururada.
Kuliyadda Sayniska Waxbarashada
Kuliyadda Maamulka Dhaqaalaha iyo Ganacsiga
Halka ay; The University of Duisburg (1555) asal ahaan ay dib taariikhda u 1555 Go'aanka ah Duke Wilhelm V ee Jülich-Cleves-Berg in la abuuro jaamacad ee duchies midaysan ee Rhine Hoose. Si taas loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ahayd in la helo ogolaansho ka mid ah boqor iyo baadari. Inkasta oo fasax ah baadari la siiyey in 1564 iyo gooyo in 1566, Jaamacada waxaa la aasaasay oo ku saabsan iyo sagaashan sano ka dib in 1654, ka dib helitaanka of duchy ee Kleve by Frederick William, Elector of Brandenburg. Waxaa furay 14 October 1655 by Johannes Claudberg sida ay Raktarka ugu horeysay. Jaamacadda lahaa afar kulliyadood: Theology, Medicine, Sharciga iyo Arts. Inta lagu jiro muddada ay dhaqdhaqaaqa waxa uu ahaa mid ka mid ah jaamacadaha dhexe iyo hoggaamineed ee gobollada galbeed ee Prussia.
Kaliya dhawr sano ee dambe jaamacadda ahaa in tartanka kula jaamacadaha Dutch aad u fiican u qalabaysan. Tan kaliya ee ku saabsan mid ka mid saddexaad ee dadweynaha ee gobollada galbeed ee Prussia ahaayeen xubin ka mid ah kiniisadda edeb, ugu muwaadiniinta Lutheran iyo Catholic ee qeybtii labaad ee qarnigii 18-, wiilashoodii bay u jaamacadaha kale ee soo diray.
Jaamacadda si degdeg ah hoos u dhacay iyo jiray 18 October 1818 ay sabab u tahay Order Golaha Wasiirada ka mid ah Friedrich Wilhelm III. si rasmi ah loo xidhay. Isla mar ahaantaana, Jaamacadda Bonn waxaa la aasaasay. qeybo badan oo ka Library Duisburg Jaamacadda ayaa loo raray Bonn iyo markaas sameeyay ku saleysan oo ka mid ah dhowaan la sameeyey Bonn Library. Sidoo kale usha Jaamacadda Duisburg la siiyey Jaamacadda Bonn, oo waa la heli karaa ilaa iyo maanta.
In 1891 ah RWTH Hüttenschule ayaa ku soo idlaaday ka Bochum in Duisburg, taas oo markii dambe lagu sameeyey si ay injineernimada Royal Prussian- iyo Hüttenschule, oo waxaa magacooda loo baxshay in 1938 si ay u Dugsiyada Dadweynaha ee Engineering.
Ka dib markii go'aanka dowladda federaal gobaleedka ee 1960 kulliyadda tababarka macalimiinta ee Kettwig ah ayaa ku soo idlaaday in Duisburg oo loo magacaabayKoriska University Ruhr. In 1968, Jaamacada waxaa la aasaasay mar kale in Duisburg, la xiriira mid ka mid ah jirka, sita magaca:Comprehensive University of Duisburg. Markii hore yar oo keliya, jaamacad la degdeg horumariyo 1970 ilaa saabsan 15,000 ardayda. In 1972 ah Koriska University Ruhr iyo Dugsiyada Dadweynaha ee Engineering, kaas oo lagu bedelay in 1971 si tacliinta sare ee xirfadaha Duisburg. dugsiyada kale ayaa sidoo kale loo raray Duisburg. The University of Duisburg waxaa ka dibna loo yaqaan Comprehensive University of Duisburg. In 1994 jaamacada waxaa magacooda loo baxshay Gerhard Mercator University.
In 2003, Gerhard Mercator University biirtay Jaamacadda Essen si ay u sameeyaan Jaamacadda Duisburg-Essen, taas oo maanta mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee Germany ku saabsan 30,000 ardayda.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Duisburg-Essen ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Duisburg-Essen rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Duisburg-Essen
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Duisburg-Essen.